Near Frantsa ny atsinanana amin'ny sisin-tanin'i Alemaina, miorina ao Strasbourg no Strasbourg gara. Io no faharoa lehibe indrindra amin'ny firenena, ary azo lazaina fa tsara tarehy indrindra.
izany tsara tarehy fotsiny ny gara teo am-boalohany ny Sao Bento de Ave-Maria drelijiozy sy avy any ivelany, mpandeha dia hahita fa ny trano tsara tarehy manana Paris izay ahitana fitambaran-vato fomba lafin-trano ivelany.
Efa nitsidika misy ireo toby lalamby tsara tarehy? Bitsika anay ny sary @SaveATrain Vonona ny hamandrika ny fiainanao manaraka? Avy eo mitsidika www.saveatrain.com
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feuropes-most-beautiful-railway-stations%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
#lalamby TrainStation Train Travel Travel travelbelgium travelfrance travelportugal